ထွဋ်ခေါင်ဖြိုး – ငပွေတိုအလွမ်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ထွဋ်ခေါင်ဖြိုး – ငပွေတိုအလွမ်း
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထူးထူးတောင်ငူသည် ငပွေတိုဖြင့် ငပွေတိုရွာကို ကိုင်လှုပ်လိုက်သည်။ ထက်လိုက်သည့်ကလောင်…. ငပွေတို ရွာသည်ပင် ပွက်လောရိုက်သွားသည်။ ငပွေတိုရွာတွင် ရယ်မောသံ၊ တောက်ခေါက်သံ၊ အဆက်သွယ်ဖြတ်သံ စသည်ဖြင့် ဘင်သိုဗင်ရဲ့ ဆင်ဖိုနီ ၉ ဖြစ်မလားထင်ရအောင် လှုပ်ခတ်သွားသည်။
သြော် … ငပွေတို …
သူက သူ့ကိုယ်သူတော့ ရွှေထူးတဲ့ …. ဒါပေမဲ့ နောက်ကွယ်မှာတော့ သူလည်း နာမည်ပြောင်ရထားသည်။ တောင်ငူမြို့စား တဲ့ …..
အင်တာနက်ပေါ်မှာတော့ Facebook ကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ကြသည်။ အများစုသဘောတူထားက ဖွဘုတ်တဲ့။ လိုတာတွေ မလိုတာတွေ ဖွလို့ထင်သည်။ ဒါကလည်း ကိုယ့်အနက်အဓိပ္ပါယ် – Definition နဲ့ကိုယ် တွေးယူထားကြသည်။ ဒီတီထွင်ချင်း သည် ကာရန်လိုက်တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ငပွေးတိုကတော့ ဘယ်ရမလဲ။ တောင်ငူမြို့စားက ငပွေးတိုစာထဲမှာ တီထွင်လိုက်သည်။ မြန်မာပြန် … မြန်မာအနက် …. မြန်မာမှု ပြောစရာမရှိ။ တောင်ငူမြို့စား ဘာသာပြန်လိုက်သည့် Facebook က ရွားဦးကျောက်သင်ပုန်းတဲ့။ ဒါကို “အမေ” တက်ရင် အင်္ဂလိပ်စာ သူငယ်တန်းဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ ထည့်မယ်လို့ အိပ်မက်ထဲမှာ ပြောနေသည်ဟု ကြားဖြတ်သတင်းများအရ သိလိုက်ရသည်။
● ရှေ့ဆက်ရာပုဒ် – နယူးဇီလန်
ငပွေတိုသားတို့သည် အမိမြေကိုလွမ်းသည့်အတွက် တွေ့ရာထင်ရာလေးတွေ အမည်ပေးကြသည်။ နယူးဇီလန်ရောက်သည့်လူများအချင်းချင်း နယူးဇီလန်ရောက် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူနေမှု၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို နယူးဇီလန်က သင်ရိုးဖြင့် ပြဌာန်းမထားသော်လည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် သင်ယူကြသည်။ ငပွေတိုသားတို့သည် အမည်ပေးကင်ပွန်းတပ်ကြသည်။
နယူးဇီလန်-ချဉ်ပေါင်…. နယူးဇီလန်မှာပေါက်တဲ့ မုန့်ညှင်းလိုလို ဘာလိုပေါက်တဲ့အရွက်။ ချက်စားရင်တော့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းလိုအရသာခပ်နည်းနည်းပေါက်သည်။ ချဉ်ပေါင်မရှိတော့ ချဉ်ပေါင်အစား အစားထိုးစားကြသည်။ စားလို့ရလား-မရလား ဘယ်သူမှမသိ။ အားလုံးကတော့ လောလောဆယ် ဥပါဒ်ဖြစ်တာမတွေ့သေးလို့ စားကြသည်။ အိမ်တိုင်းမှာစိုက်ထားတာ တောင်တွေ့ရသည်။။
ဒီလိုနဲ့ ငပွေတိုးသားတို့သည် အမိမြန်မာပြည်နှင့်တူတဲ့ အပင်တွေကို အမည်ပေးကြသည်။ နယူးဇီလန်-တမာ၊ နယူးဇီလန်-မြင်းခွာ (မစားရသည့်အပင်ဟု နယူးဇီလန်မှာ သတ်မှတ်ထားသည်)။
အဆိုးဆုံးကတော့ နယူးဇီလန်-သင်္ကြန်… မိုးကလည်းရွာ၊ ဆောင်းဦးရာသီမှာရောက်နေသဖြင့် ရေလောင်းလည်းမရ။ ယဉ် ကျေးမှုကလေးတွေကိုကြည့်၊ မြန်မာ မုန့်-ထမင်းတွေကိုစားကြသည်။ လူခြင်းစကားပြောတာလေးတွေ လုပ်ကြသည်။
ဒို့အမ ဂျာကြီးကတော့ Ruby ကစားနည်းကို ဘောလုံးလုပွဲလို့ အမည်ပေးလိုက်သည်။
တခါက လမ်းသွားရင်း ငှက်တကောင်ကိုတွေ့လိုက်သည်။ ငှက်က ခေါင်းက အမဲရောင်၊ လည်ပင်းမှာအဖြင်ရောင်ဖြင့် ကိုယ် လုံးမှာ အဖြူနှင့်အမည်းကိုကြားထားသည်။ ကျနော်လည်း စကားမစပ် “အဲဒီ့ငှက်ဘာငှက်ထင်လဲဟု မေးလိုက်သည်”။ ပြန် ဖြေသူက “မင်းကလည်းကွာ ငှက်က မြန်မာပြည်က ကျီးကန်းနဲ့တူတယ်။ အဲဒါ နယူးဇီလန်-ကျီးကန်းပေါ့ ” ဟု ကျနော့်ကို ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
သြော် …. နယူးဇီလန်သည် ငပွေတိုးသားတွေအတွက်တော့ ရှေ့ဆက်ရာပုဒ်ဖြစ်လာသည်။ သူ့တို့တွေစိတ်ထဲမှာ မသိလိုက် မသိဘာသာ အမိမြေကို လွမ်းနေသေးကြာင်းကိုလည်း တွေ့လိုက်ရသည်။ မသိလိုက်မသိဘာသာ ကိုယ်ပိုင်အမည်တွေ တီထွင်ကြသည်။
ဒါနဲ့ အငြင်းပွားစကာတီထွင်မှုတခုသည် အခုချိန်ထိ ငြင်းနေရစမြဲ။ ကိုရဲကတော့ Asparagus ကို ကညွတ်လို့ ဘာသာပြန် ထားသည်။ လက်မခံသူတချို့က Asparagus က ကညွတ်နဲ့မှမတူတာ ဖလန်တောင်ဝှေးနဲ့ပိုတူတယ်။ သူက အချောင်းအရှည်၊ အရိုးကို တပြားရိုက်ပြီး ကြော်စားလို့လည်းရတယ်ဆိုပြီး ကညွတ်လို့လက်ခံသူနှင့် ဖလန်တောင်ဝှေးသုံးစွဲသူတွေကို တွေ့ လိုက်ရသည်။ ဒါကလည်း ငပွေတို ၂-ပင် ညီလာခံဒါမှမဟုတ် One Tree Hill က အပင်ကြီးမှ ….
မကြာခင် အားလုံးရင်ထဲမှာ သင်္ကြန်ပိုးထလာတော့မည် ….
ငပွေတို လွမ်းချင်း …. ငပွေတိုအလွမ်း ….
ထွဋ်ခေါင်ဖြိုး – အပျိုစင် (0)